त्यो रात २७ पटक कस्ले कल गरेको थियो भुपेन्द्रलाई ? -
Home News त्यो रात २७ पटक कस्ले कल गरेको थियो भुपेन्द्रलाई ?
कैलालीको लम्कीचुहा–१ स्थित बडुवाल परिवार अहिले शोकमा छ। कारण– कात्तिक २३ गते मंगलबार राति टीकापुरमा २२ वर्षीय भूपेन्द्र बडुवालको ज्या’न लि’ईयो । उनलाई आ’परा’धिक गि’रो’हले राति ९ बजे खु’कु’री प्र’हा’र गरी ह’ ‘त्या ग’रे’को थियो।
बडुवाल लम्कीचुहा नगरपालिका–१ का बासिन्दा हुन्। बडुवालको ह’ ‘त्या टीकापुरस्थित सिद्धार्थ होटेल नजिकै भएको थियो। उनको ह’ ‘त्या भएको एक हप्ता बित्नै लाग्दा पनि प्रहरीले मुख्य आरोपितलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन।
Previous articleश्रीमतीको दा’हसंस्कार गरेर फर्किरहेका पति, छोरा-छोरी सबैको बन्यो एउटै चि,हान
Next articleससुरालीका सबै मिलेर कु’ टेको भन्दै युवकले सु’सा’इड नो’ट लेखेर सधैको लागि अ’स्ताए